Rotary Tools များကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်နည်း။ - Mibond စက်ပစ္စည်း
နေအိမ် / သတင်း / ဘလော့ / Rotary Tools များကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်နည်း။
Rotary Tools များကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်နည်း။
views:100 Author:ဆိုက်ကို Editor ကို အချိန် Publish: 2021-04-17 မူလ:ဆိုက်ကို
သင်ဝယ်ယူသည့်အခါအများအပြားရှိတတ်သော Tool Shop Rotary Toolသင်လိုအပ်လိုသောအလုပ်အမျိုးအစားနှင့်လည်ပတ်ပုံရိပ်သည်မည်သို့ကူညီနိုင်ကြောင်းသင်ဂရုတစိုက်စဉ်းစားသင့်သည်။ တစ် ဦး rota ရွေးချယ်တဲ့အခါမှီခိုTool, သင်သည်အောက်ပါရှုထောင့်များကိုစဉ်းစားနိုင်သည်။
TသူRoto Cutter tool ကို အားဖြင့်မောင်းနိုင်ပါတယ်အဆမျက်နှာအလို့သို့မဟုတ်လျှပ်စစ်မီးနှင့် rotaမှီခိုPneumatic မှမောင်းနှင်သည့် tool ကိုယေဘုယျအားဖြင့်အချို့သောလေးလံသောပရော်ဖက်ရှင်နယ်လုပ်ငန်းများကိုအသုံးပြုသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရရင် rotaမှီခိုကိရိယာတန်ဆာပလာနှင့်ကျယ်ပြန့်သော application ပါသောအီလက်ထရောနစ်ကိရိယာများကိုရည်ညွှန်းသည်။
rotaမှီခိုကိရိယာများကိုကြိုးကြိုးချည်နှောင်ထားနိုင်ပြီး၎င်းတို့အားအားပြန်သွင်းနိုင်သည့်ဘက်ထရီ packs များဖြင့်အသုံးပြုသည်။ ကြိုးခင်းRotary tool ကိုကြိတ်sတစ်မိနစ်လျှင်လည်ပတ်မှု 35000 အထိမြန်နှုန်း (RPM) အထိမြန်နှုန်းကိုရောက်နိုင်သည်။ ကြိုးမဲ့ rotary tools များသည် RPM 15000 အထိသာရောက်ရှိနိုင်သည်။
ယေဘုယျအားဖြင့်စကားပြော, စျေးကြီးသော rotaမှီခိုကိရိယာများသည်လှည့်မြန်နှုန်းကိုချိန်ညှိနိုင်သည်။Mini Rotary Tool ကို satesမကြာခဏပုံသေနှုန်းသာရှိသည်။ သင်တစ် ဦး rota အသုံးပြုရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ကြသောအခါမှီခိုအချိန်ကြာမြင့်စွာ tool ကိုသင် rota ကိုရွေးချယ်သင့်သည်မှီခိုမော်တာဖြီးပြီးနောက်အစားထိုးနိုင်သည့် tool ကိုဝတ်ဆင်ထားသည်။ အသုံးအများဆုံး rotaမှီခိုtool ကိုရိုးရှင်းတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းအနည်းငယ်ရှိပါတယ်။ မတူညီသောဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိုတပ်ဆင်နိုင်ပြီးမတူညီသောအလုပ်အမျိုးအစားများအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ မတူညီသောအလုပ်များအတွက်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအလုံအလောက်ရှိစေရန်သေချာစေရန်အတွက်သင်သည် rota ကို0ယ်ရန်စဉ်းစားနိုင်သည်မှီခိုယေဘုယျအားဖြင့်အချို့သောဘုံ rota ပါရှိသည်သော Tool Kitမှီခိုကိရိယာဆက်စပ်ပစ္စည်းများ.
rotaမှီခိုကိရိယာများသည်မှန်ကန်သော rota ကို အသုံးပြု. ကွဲပြားခြားနားသောအလုပ်များကိုပြီးမြောက်စေသည်မှီခိုဒီလောက်နေသမျှကာလပတ်လုံး ToolitMini Rotary Tool Kitတူညီသောအရွယ်အစားရှိပါတယ်, သူတို့အစားထိုးနိုင်ပါတယ်:
1 ။ထွင်းထုခြင်းနှင့်ထွင်းထုခြင်း - မြန်နှုန်းမြင့်ခုတ်ဖြတ်ခြင်း, ထွင်းထုဖြတ်တောက်ခြင်း, Carbide Cutters, စိန်ဘီးအချက်များ
2 ။routing: router bits, courthole router bits, ထောင့် router bits နှင့် groove router bits အပါအ0င် router-bits
3 ။Darking:Rotary Tool Drill Bits
4 ။Polishing: ပိုလန်အချက်များသို့မဟုတ်တစ်မျိုးတည်းသောဘီး, ထက်မြက်သောဘီးများနှင့်သဲဗုံ
ဘယ်လိုcတစ် ဦး နှင့်အတူ utrဒိုပီtool?
rotaမှီခိုကိရိယာများသည်ကောင်းမွန်သောဖြတ်တောက်ခြင်းအတွက်အလွန်ကောင်းသည်။ သင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ပြီးအောင်လုပ်ပါရှည်လျားပြီးဖြောင့်ဖြတ်ခြင်းသူတို့ဟာမြင်ကွင်းအမျိုးမျိုးကိုရွေးချယ်သင့်တယ်,အားလုံး freehandနှင့်အတူဖြတ်တောက်သောအခါBlade Rotary Tools များ:
1 ။Drywall, Wood, Plasterboard သို့မဟုတ်အခြားအလင်းပစ္စည်းများဖြတ်တောက်ခြင်းသည်ဖြောင့်သော router bit ကိုသုံးပါ။
3 ။ထူသောသတ္တုနှင့်အခြားခက်ခဲသောပစ္စည်းများဖြတ်တောက်ခြင်းအတွက် carbide cutter ကိုသုံးပါ။
6 ။သတ္တုကိုဖြတ်တောက်ချိန်တွင်ပွတ်တိုက်မှုကိုလျှော့ချရန်ဖြတ်တောက်ခြင်းဆီကို သုံး. ၎င်းသည်ကိရိယာမှထုတ်ပေးသောအပူပမာဏကိုလျှော့ချပါ။
ဘယ်လိုcတစ် ဦး နှင့်အတူ arverဒိုပီtool?
MIni Brushless Rotary tool ကိုဒဏ်ငွေထိန်းချုပ်မှုပေးနိုင်သည်, ထို့ကြောင့်သူတို့သည်ထွင်းထုခြင်းနှင့်စွဲလမ်းရန်အလွန်သင့်လျော်သည်။Rotaryကိရိယာများကိုများသောအားဖြင့်ကောင်းမွန်သောအလုပ်များကိုပြုလုပ်ရန်အသုံးပြုလေ့ရှိပြီးသစ်သားဗီဒင်္ဂါးပြားများနှင့်ပရိဘောဂများကိုပြုလုပ်လေ့ရှိသည်.
1 ။Carbide rotary-bits နှင့် router bits သည်ထွင်းထုခြင်းနှင့်စွဲလမ်းမှုအတွက် go-to bits ဖြစ်သည်။
2 ။ထွင်းထုနေစဉ်သင်ပစ္စည်း၏မီးခိုးသို့မဟုတ်အရောင်ပြောင်းကိုသတိထားမိလျှင်, ထို့နောက်lမြန်နှုန်း setting ကို erler ။
3 ။အကယ်. Rotary Tool ၏မော်တာနှေးကွေးသည့်အခါ,ငထွင်းထုပစ္စည်းအပေါ်တက်။
ဘယ်လိုsနှင့်သို့မဟုတ်pတစ် ဦး နှင့်အတူ Olishrဒိုပီtool?
rotaမှီခိုကိရိယာများသည်ဓားကိုမြှင့်တင်ရန်အလွန်ခဲယဉ်းနိုင်သော်လည်းလက်ဝတ်ရတနာများကိုညင်ညင်သာသာအရောင်တင်သည်။ သငျသညျပင်နိမ့်မြန်နှုန်းကိုသုံးနိုင်သည်Ratchet tool ကိုအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်လက်သည်းများကိုခွဲထုတ်ရန်.
1 ။စီမံကိန်းများကိုရေဖြည့်ရန်သို့မဟုတ်ဖြည့်စွက်ရန်အတွက် Sanding Drum Bit ကိုသုံးပါ။ Sanding Drum Bits သည် Countrenings တစ်ခုအကွာအဝေးတွင်ရှိသည်။ Coarser -bits သည်ခက်ခဲသောပစ္စည်းများသိုလှောင်ရန်အတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအရာဖြစ်သည်။ နူးညံ့သောပစ္စည်းများ,
2 ။polishing, ဝါယာကြိုးဖြီး, polishing polishing polishing သို့မဟုတ် polishing ဘီးကိုသုံးပါ။
3 ။အနိမ့်အမြန်နှုန်းဖြင့်စတင်ပါ။ လိုအပ်သလိုအလတ်စားမြန်နှုန်းအထိအလုပ်လုပ်ပါ။
4 ။ကြီးမားသောအလုပ်များအတွက်, Coarser-bits မှနူးညံ့သော bits မှရွှေ့။
ဤမျှလောက်အသုံးချရန်နည်းလမ်းများစွာဖြင့်၎င်းကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုသိခြင်းtungsten carbide rotary burr ဖြတ်တောက်မှုကိရိယာများသတ်မှတ်ထားသည်အဆိုပါ avid diyer များအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ တစ်စီးမစ်ကြီးRotary Tool Kit သည်မည်သည့် toolbox အတွက်မဆိုစမတ်အပိုဆောင်းကိုပြုလုပ်သည်။
ဘုံ Tool ဆိုင် Rotary Tool Roto Cutter tool ကို Rotary tool ကိုကြိတ် Mini Rotary Tool ကို sate Mini Rotary Tool Kit Rotary Tool Drill Bits Blade Rotary Tools များ Mini Brushless Rotary Tool Ratchet tool ကို tungsten carbide rotary burr ဖြတ်တောက်မှုကိရိယာများသတ်မှတ်ထားသည်